प्रदेश सरकारलाई भारदारी सभा बनाउन खोजियो
प्रदेश सांसद, दोलखा
दोलखा जिल्लाबाट प्रदेश सभा सांसदमा निर्वाचित विशाल खड्का प्रदेश नम्बर ३ को नाम गौरीशंकर राख्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालमण्डल, ताम्सालिङ र बागमती जस्ता नामले सिंगो प्रदेशलाई समेट्न नसक्ने भन्दै गौरीशंकर नामाकरण गरिए सबैको अपनत्व हुने राय उनको छ । गणतन्त्र आएको र मुलुक संघीयतामा गएको भएपनि नेतृत्व पंक्तिमा पुरातन सामन्ती सोच विद्यमान रहेकाले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको खड्का बताउँछन् । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त सरकारको रुपमा चल्न दिने भन्दा पनि आफू मातहतको भारदारी सभा बनाउने मानसिकता केन्द्रमा रहँदा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारलाई भारदारी सभा बनाउने मानसिकताबाट मुक्त नगराएसम्म सुशासन कायम गर्न र परिणाममुखी बनाउन असम्भव भएको सांसद खड्काको दाबी छ । प्रदेश नम्बर ३ को विकासमा प्रदेश सरकारको भूमिका, प्रदेशको नामाकरण र सरकारको वर्तमान कार्यशैली लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश सांसद विशाल खड्कासँग नेपालपत्रन्यूजका सम्पादक माधव खड्काले गरेको कुराकानी:
हाम्रो यात्रा समाजवादको हो । हामी समाजवादमा जाने भनेका छौं । काँग्रेस र कम्युनिष्ट सबैले समाजवादमा जाने भनेका छन् । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख मुलुक भनेर किटान गरेको छ । तर समाजवादको आधारभूत मान्यतालाई सरकारले फलो गरेको छैन । जनतालाई उपभोक्ता बनाउने मानसिकता समाजवाद होइन । जनता मगन्ते हुन् र सरकारले दिने हो भन्ने सोच विद्यमान छ । समाजवादको पहिलो आधार भनेको जनतालाई अभियानकर्ताको रुपमा लिनुपर्छ । सरकारको मुख्य सरोकारवाला भनेको जनता हुन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख सरोकारवाला प्रदेशवासी हुन् । प्रदेशवासी प्रदेश सरकारको अभियन्ता हो । उपभोक्ता मात्रै होइन । यो मानसिकता नै गलत छ । काशी जाने कुतीको बाटो भनेजस्तै यो तरिकाले हामी समाजवादमा पुग्न सक्दैनौं । कहाँनेर किसानको गोठ छ भनेर किसानको नीति बनाउनुभन्दा पनि जसले प्रपोजल लेख्न सक्छ उसले अनुदान पाउने खालको नीति हामी बनाइरहेका छौं । शिक्षा सम्बन्धी नीति त्यहि खालका छन् । सामुदायिक विद्यालयको हरेक वर्षको एसईई रिजल्ट लज्जास्पद छ । अहिले ग्रेडिङ सिस्टममा जीपीए २ भन्दा मुनि ल्याउने विद्यार्थी ४८ प्रतिशत रहेका छन् । त्यो भनेको फेल सरह हो । तर प्राक्टिकलमा भने २५ मा २५ माक्र्स दिइराखिएको छ । थ्योरीमा ५ माक्र्स ल्याएको छ । बी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थी पास भएका हुन् भन्ने मानसिकताबाट हामी गइरहेका छौं । यसले गर्दा विद्यार्थीको क्षमता खस्कँदै गएको छ । हामी कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौैं ? राज्यको नीतिले काम गरेको छ कि छैन ? भन्ने जस्ता कुराको आधारभूत विद्यालयदेखि नै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो नगरिकन दुइतिहाईको सरकारले फेरि अर्को चुनावलाई टार्गेट गरेर बस्नु लज्जास्पद हो । वितरणमुखी र कसैलाई रिझाउने हिसाबले पुरातन मानसकिताबाट सरकार र संसदीय व्यवस्था चलेको छ । सिस्टमप्रतिको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप र परिवर्तनप्रतिको ठूलो उपहास हो यो । यसले गर्दा नेतृत्वले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (ने क पा) को एकाताले पूर्णता नपाइराखेको र संस्थागत बैठकहरु चल्न नसकिरहेको अवस्था छ । साधनमा नै डेमोक्रेसी छैन भने साध्यमा परिणाम देख्न सकिँदैन । पार्टीको अस्तव्यस्तताको प्रतिविम्ब सरकार भइराखेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसमा पनि त्यस्तै भद्रगोल छ । पार्टीको विधानले दोश्रो ठूलो दललाई प्रतिपक्षको रुपमा स्वीकार्ने भनिएको छ । संविधान र हाम्रो पार्टीको विधानमा उल्लेख भएपनि काँग्रेस भित्रको गुट र उपगुटले गर्दा प्रतिपक्षीको भूमिका उसले निभाउन सकेको छैन । काँग्रेस लामो इतिहास भएको पार्टी हो । बीपीले सृजना गरेको सिद्धान्तमा हिँडिरहेको पार्टी हो । तर त्यसको महशुस गर्ने अवस्था काँग्रेसमा छैन ।